iyona ngosawoti kanjani Bracken Fern? Lokhu sizokutshela esihlokweni samanje.
Ngaphambi kokuthi ngikuxoxele kanjani Fern salting ekhaya, kufanele ungitshele ukuthi lokhu isitshalo.
Ngokuqinisekile abantu abaningi bazi ukuthi emhlabeni kabanzi kunezinhlobo ezingaba ngu 10,000 zinhlobo ezahlukene Fern. Lokhu sitshalo esimangalisayo zingatholakala ezweni lethu. Isikhathi esining impela uyakhula amahlathi aminyene futhi omnyama okuxubile.
Ngeshwa, akuyona yonke izakhamuzi Russia ukwazi ukuthi ngaphezu umsebenzi zokuhlobisa, Izinhlobo, noma kunalokho, grade yabo ethize (isib Bracken) kabanzi ibhizinisi Culinary.
Ngokusho ukunambitheka yakho, wathi zezimila ifaniswe kuphela ukuthi isikhunta esinamanzi.
Pho kwenzeka kanjani Fern ngosawoti Bracken? Ukuze ukulungiswa izitshalo ezifana kumele kusetshenziswe amahlumela amasha kuphela, eshiya eyayintula kodwa hhayi evulekile, futhi cuttings kwakungafanele eside 25 cm.
A iresiphi elula for pickling Fern
Eqinisweni, ekulungiseleleni Ungadla ezifana akukho nzima. Ukuze uthole amalungiselelo okumnandi kakhulu futhi elimnandi ebusika, kubalulekile kuphela ngokuqinile nezidingo iresiphi, bese usebenzisa isilinganiso esifanele izithako.
Ngakho, ukuze salting Fern kuphumelela, kubalulekile ukulungiselela:
zinhlobo abasha rostochku isitshalo Pteridium aquilinum - ukusetshenziswa ngokubona;
usawoti Cookbook ezinkulu - cishe 30g (esetshenziselwa marinade 1 l amanzi);
ushukela omhlophe omkhulu - mayelana 80 g;
ithebula 6% uviniga yemvelo - mayelana 50 ml;
amanzi okuphuza - Sebenzisa uma bebona kunesidingo.
Salting Fern - inqubo elula kakhulu futhi esheshayo. Ngemva rostochku abasha iphazamiseke ngokhuni, amahora zabo ezimbili ofakwe amanzi abandayo wageza kahle usebenzisa colander.
Ukuze uthole isidlo kakhulu esithambile futhi usentekenteke, umkhiqizo main kumele ngaphansi blanching. Ukuze wenze lokhu, Bracken ukusabalala endishini enkulu eyigugu futhi ngokushesha uthele abilayo enosawoti amanzi abilayo. Ngenxa yalokho, lesi sitshalo wagcinwa imizuzu 4, bese udlala kwi-colander bese ngokuqinile ezinyakaziswayo off, ekuqedeni elinye umswakama ngokweqile.
Salting Bracken Fern kungenziwa ngezindlela ezahlukene. Sanquma ukuba kunikeze kuwe zokupheka kunazo esilula ukuqaliswa okungadingi i a lot of izithako.
Emva izitshalo asanda abelethwe sizocutshungulwa kahle, qala ukulungiselela marinade. Ngenxa yalesi ezivamile amanzi okuphuza ngamathumba phezu ukushisa eliphezulu, bese siphela therein usawoti kanye noshukela. Ngemva kokususa isidlo kusukela isitofu, liyanezela uviniga bese uqale salting.
iyona ngosawoti kanjani?
Fern wabeka isigamu ilitha noma 750 g izimbiza, okuyinto inzalo kusengaphambili ngendlela kubhayela double. Plant spoon kancane tamped, ke uthele brine ashisayo.
Ukugcwalisa zonke izitsha, base ngokushesha Roll, sebenzisa inzalo metal zamabhodlela. Ukuvula izimbiza sibheke phansi, basuke zihambisana i ingubo endala uqweqwe kwesokunxele kulesi sikhundla usuku lonke.
Njengoba isikhathi sihamba, usongwa isidlo ngasiphi endaweni ehlanzekile epholile futhi amnyama. Lokhu dish kuba efanelekayo ukusetshenziswa cishe ngemva 4-7 izinsuku. Kwakuphakathi nalesi sikhathi Bracken Fern satiate flavour of marinade, ithambe futhi amnandi kakhulu.
Indlela ukwethula eyodla?
Njengoba ubona, salting Fern ekhaya akudingi amakhono akhethekile nemishini ekhethekile.
Ngemva isitshalo ngosawoti, ke ngobumnene lakhishwa marinade futhi basakaza endishini. Ayoliswe isidlo ochotshoziwe garlic kanye pepper omnyama, ayoliswe ngayo amafutha sunflower, kanye nanoma yikuphi isoso noma utamatisi unama.
Govuza yezingxenye, basuke wakhonza etafuleni, kanye nocezu rye isinkwa.
Lungiselela Ungadla okumnandi futhi amafutha anephunga elimnandi
Salting Fern ebusika anganikeza ukusetshenziswa izingxenye ezahlukene ngokuphelele. Uma ufuna ukwenza isidlo okunama-kilojoule amaningi kakhulu uphuzo oludakayo, siphakamisa zisebenzisa leresiphi. Ukuqalisa ke, sizodinga:
sodium usawoti ezinkulu - mayelana 40 g (esetshenziswa marinade 1 l amanzi);
ushukela omhlophe omkhulu - mayelana 100 amagremu;
lavrushki, pepper imbiza - ukunambitha;
sunflower oil ayinaphunga - 200 ml;
ithebula 6% uviniga yemvelo - mayelana 60 ml;
amanzi okuphuza - ukusetshenziswa ngokubona.
Inqubo ukulungiswa Bracken Fern Ungadla ebusika kufanele kube kahle ngendlela efanayo njengoba yethulwa ngenhla. Lesi sitshalo is bahlanza ngokucophelela, blanched, engahashazanga ngamanzi abandayo bese kakhulu ukunyakaza.
Salting Fern usebenzisa marinade elimnandi namafutha kuthandwa kakhulu phakathi labapheki. Lokhu kungenxa yokuthi ukuziqalela enjalo iphendula konke simnandi kakhulu futhi yasekuqaleni. Ukuze silungiselele ke, kudingeka wenze marinade. Ngenxa yale njongo, thumba amanzi okuphuza ku ilangabi okusezingeni eliphezulu bese engeza usawoti kanye noshukela. Ngemva kokuphela izithako izitsha isuswe ekushiseni ngokushesha wathela uviniga.
Ngokuqondene amafutha sunflower, alo kakhulu ukufuthelana endishini ngokushesha wasebenzisa nezinye izinjongo.
Inqubo Ungadla ukwakha
Ukuze wakhe owakho Ungadla ezifana kuthathwe inzalo isigamu-litre amabhodlela amaningana bese bawendlala pepper, bay leaf futhi iphathwa Fern Bracken. Izitshalo abese uthele ingxenye marinade, bese uhlanganisa amafutha ashisayo.
izimbiza Ukugcwalisa, Roll siziguqule esiphendula esibhekisa phansi. Ngemva kokukhuthazelela isidlo ngaphansi ngongqimba (cishe usuku), it is ithunyelwa indawo yokugcina ukudla noma emiphongolweni.
Khonza oily isidlo Bracken Fern etafuleni kufanele kuphela ekupheleni kwenyanga yokuqala ngemva crimping. Lesi sitshalo ithathwa lamabhange, kanye marinade bese bekhonza nocezu lwesinkwa emhlophe.
Quick ngosawoti Fern
Uma ungafuni ukuvuna Fern ebusika, siphakamisa ukuba sisebenzise uhlelo lula ngosawoti walo. Ngenxa yalesi sidinga:
enkulu yokupheka usawoti - ukusetshenziswa ngokubona.
Fern anosawoti ngendlela elula. Asanda abelethwe izitshalo kahle wageza kwengcindezi enamandla amanzi, bese shake kakhulu kwi-colander. Ngemva Fern otshiya umswakama okweqile, kwasakazeka endishini, futhi enongiwe amaningi kasawoti.
Govuza yezingxenye wezandla iphephandaba imbozwe futhi ushiye eqadi ¼ ihora. Ngemva kwalokho, wonke ingilazi preform oluhlukaniswe amabhange. Ukuze Fern wanika juice yakhe futhi ezinhle amanzi okugqumisa, kumelwe tamped usebenzisa tolkushkoy.
Emva ukugcwalisa zonke izitsha, zamabhodlela zabo uphawu polyethylene ezivamile futhi ngokushesha wathumela ku-chamber esiqandisini. Ukugcina a workpiece ukuba kuphela emakhazeni. Uma Fern ame ekamelweni lokushisa, kuyoba ukuwohloka ngokushesha ngempela.
Kanjani futhi yini ukusetshenziswa?
I preform senziwa ngokusho iresiphi ngenhla, akuvamile iphuzwe isidlo, njengoba kuvela okunosawoti kakhulu. Kule ndaba, umkhiqizo elinjalo isetshenziswa kuphela ukupheka nezinye izitsha. Ngokwesibonelo, Fern okunosawoti ngokuvamile wanezela goulashes ezahlukene, izitsha lesibili nelokuqala. Do it ngokwakho phakathi kwenqubo ezishisayo ukudla okuyisisekelo.
I umdlezane ukudla - izimfihlo yokudla efanele